मध्य पूर्व - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्रेणी: मध्य पूर्व
विश्व कला दुबई 2021
मार्च 16, 2021 मार्च 15, 2021 सनथ पोलमोर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
वर्ल्ड आर्ट दुबई एक बर्षमा एक पटक हुने घटना हो जुन विश्वभरिबाट कला देखाउँदछ। विश्व कला दुबई मध्य पूर्वको बढ्दो कलाको मागको कारण हो। फेसन कला अवरोधकहरूबाट पप कला, र प्रयोगात्मक अभिव्यक्तिवादीहरूबाट ललित कलासम्म, वर्ल्ड आर्ट फेयर दुबईसँग कला अफिकियान्डोको लागि धेरै प्रस्ताव छ। दुबईमा सब भन्दा ठूलो कला घटनाहरू मध्ये एकको रूपमा परिचित, वर्ल्ड आर्ट दुबई २०2021 ले संकलनकर्ताहरू, खरीददारहरू, र कला उत्साहीहरूलाई विश्वभरिबाट आर्टवर्कको प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ। एकल कलाकार र अन्तर्राष्ट्रिय ग्यालरीहरूबाट कलाकृतिहरू खरीद गर्न मूल्य १०० डलरबाट शुरू हुन्छ।
कसरी खुशी र स्वस्थ कार्यक्षेत्र को पहिचान गर्ने?
सम्पादकको पिक मार्च 13, 2021 मार्च 12, 2021 लुइस रोलेन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इक्कीसौं शताब्दीका मानिसहरु कडा मेहनत गर्न र उनीहरूको विकास र विकासको सपना साकार गर्न बढी उत्प्रेरित र उत्साहित छन्। केही व्यक्तिहरू नौ देखि पाँचको परम्परागत कार्य सेटिंग मन पराउँदैनन् र अधिक आराम र लचिलो समयहरू मन पराउँछन्। जबकि अरूहरू आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रति दिन १teen देखि बीस घण्टासम्म काम गर्छन्।
रातभरि क्याम्पिंगले तपाईंको स्वास्थ्यलाई कसरी बढावा दिन सक्छ?
सम्पादकको पिक मार्च 12, 2021 मार्च 12, 2021 खोज अनुकूलक	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विश्व एकदम द्रुत गतिमा भएको छ, तर जीवनशैली आसीन भएको छ। मानव स्क्रिनको साथ पासोमा पर्दछ जसले तिनीहरूलाई सँधै व्यस्त राख्छ। १० मिनेट जति प्राप्त गर्नु कुनै प्रकारको स्क्रिनमा नहेरीकन असम्भव देखिन्छ। पर्दामा डुबेको रहन धेरै मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक स्वास्थ्य चिन्ताको कारण हुन्छ, र ती मध्ये धेरैले पनि याद नलगाइन्छ।
मार्च 5, 2021 मार्च 5, 2021 केशव मेहता	टिप्पणी छोड्नुहोस्
१ on मा जन्मth जुलाई, १ 1999 2012।, मोहम्मद इस्माईल जासेम अलहोसानी युएईका निवासी हुन्, मौलिक इमिराटी जो हाल मोहम्मद बिन जायदमा बस्दछन्। २०१२ मा सुरु भएको युएई लिगको धेरै जितेको उनी हो। उनले त्यसबेला फिर्ता प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए र जमाल अलहस्नीले उनलाई प्रायः प्रशिक्षक बनाए। २०१ 2017 मा उनी सबै लीगहरू र खेलहरूमा प्रशिक्षण ब्रेकमा गए जुन उनी राम्रो स्कोर गर्दै थिए, यो यो हो किनभने खेल मापदण्डका प्रत्येक पेशेवर खेलाडीले समय-समयमा आफूलाई तालिम दिन र आफैलाई विश्राम दिन महत्वपूर्ण छ। ती पनि कि ती मजबूत फिर्ता आउन सक्छ। उहाँलाई आपत्तिजनक चट्टानको उपनाम दिइन्छ।
कार्यक्षेत्र उत्पीडनमा किन नियन्त्रण हुनु महत्त्वपूर्ण छ
फेब्रुअरी 13, 2021 फेब्रुअरी 12, 2021 लुइस रोलेन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कार्यक्षेत्र उत्पीडन एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जुन मानिसहरूले उनीहरूको काममा सामना गर्छन्। उत्पीडनको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरू उनीहरूको जागिरमा पर्न कम उत्साहित हुन्छन् र उनीहरूको जागिर छोड्छन्। तर रोजगार स्वीचिंग उत्पीडनबाट बच्न विकल्प छैन। आवश्यक कार्यहरू कार्यस्थललाई उत्पीडन-मुक्त बनाउनको लागि आवश्यक छ।
संरचित केबलि System प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको बारेमा एक संक्षिप्त गाईड
फेब्रुअरी 10, 2021 फेब्रुअरी 10, 2021 लुइस रोलेन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विश्वमा केबलि system प्रणाली द्रुत रूपमा विकसित हुँदैछ। परिवर्तनशील टेक्नोलोजिकल परिवर्तनहरूले सर्तहरू अझ उन्नत बनाउँदैछ। केबलि ofको अधिक उन्नत रूप संरचित केबलि is हो। संरचित क्याबलिंग प्रणाली आईटी विश्वमा धेरै आधारभूत र उन्नत अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। उद्योगहरू जो संरचित क्याबलि system प्रणाली प्रयोग गर्दैछन् आईटी, डाटा केन्द्रहरू र टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क हुन्। बहुमुखी प्रतिभा र केबलको विश्वसनीयताका कारण, यो व्यवसाय र घरपरिवारको शीर्ष प्राथमिकतामा भइरहेको छ।
तेल मूल्यहरु Year बर्ष न्यूनतम पछि पुन: प्राप्ति
तेलको मूल्य उच्च मा उकास्न जारी। तेलको मूल्य अब पुन: रिकभर भएको छ जुन पछि five बर्षको न्यूनमा झर्छ। वास्तवमा तेलको मूल्य bar० प्रति ब्यारल भन्दा माथि छ, जसले धेरै मानिसहरूलाई आश्चर्यको बनाउँदछ कि तेलको मूल्य अझ माथि जानको लागि ट्रिगर गर्नेछ।
घटना प्रवृत्ति तपाईले २०२१ मा पछ्याउनु पर्छ
जनवरी 22, 2021 जनवरी 21, 2021 लुइस रोलेन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
घटना उद्योगले महामारीको कारण वर्ष २०२० को बखत ठूलो परिवर्तनको सामना गर्यो। सुरुमा, सबै कुरा बन्द थियो, र प्रायः स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू रद्द गरियो। संयुक्त अरब एमिरेट्स जस्ता देशहरूमा सडकहरू र घटनास्थलहरू खाली थिए, जुन प्राय: पूर्ण रूपमा खचाखचा हुन्छन् र दुई व्यक्तिको लागि पनि पर्याप्त ठाउँ थिएन।
12... 25 पुराना पोष्टहरू।